Stock Market Nhau | Economics Zvemari (Peji 2)
Ndedzipi nzira dzakanakisa dzekudyara muNasdaq?
Nasdaq Stock Market (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) inozivikanwa nekuve musika uko iyo ...
Kufunga nezvekudyara mumusika weChina wemusika? Pano tinotsanangura izvo index yayo uye nemaawa anowanikwa nekuchinjana kweAsia.
Kuona kuti zvinobatsira here kuisa goridhe chimwe chinhu chatingawana kana tichiziva zvikonzero zvekumhanya kwayo. Kukwira kwemitengo, hwaro hwemari uye kudzoka.
Minnows vs. Shark: Iyo Nyaya yeGamestop uye Reddit
Ndira 27, 2021 ichaenda pasi munhoroondo seimwe remazuva asinganetsi paStock Market, ine ...
Tsananguro yezvinhu Zvemari Sarudzo, mashandiro uye maPuts anoshanda sei, uye njodzi pamwe nezvakanakira kubatanidzwa mukudyara navo.
Tsananguro yezvose zvine chekuita nekuchinjanisa mu forex. Izvo zvazviri, zvinobva kupi, zvinoverengerwa sei, uye kuti ungabatsirwa sei nazvo
Tsananguro yemisungo yepfungwa yehuropi hwedu pakuisa mari. Kunzwisisa psychology yekudyara kunotibatsira kudzivirira zvikanganiso uye kugadzirisa sarudzo
Chinyorwa chakagadzirirwa kutsvaga izvo zvigadzirwa zviripo zvekudyara mazviri, izvo zvinofanirwa kutariswa, uye akasiyana profiles ekudyara
Tsananguro yezviri iyo indekisi yeBuffet, kwainowanikwa, kubva pakuverengwa, uye nemashanduriro ainoita sedudziro yemasheya
Iko kune zvakawandisa kuchengetedzwa kubva kwaunogona kugadzirisa zvigaro kuti udzoke gare gare nemitengo yakasimba.
Iyo Nikkei ndiyo yakanyanya kukosha indekisi yeJapan equities, seimwe yedzimwe nzira dzekudyara mumisika yeEuropean stock. Iyo Nikkei Iyo Nikkei ndiyo yakanyanya kukosha indekisi yeJapan equities, seimwe yedzimwe nzira dzekudyara mumisika yeEuropean stock.
Masheya mashanu ane mukana mukuru wekutenda
Iko mukana wekuwongorora musiyano uripakati pemutengo wakanangwa nemutengo wazvino weaseti yemari, mu ...
Russell 2000: iyo huru isingazivikanwe yemusika weUSA pamusika
Chii chinonzi Russell 2000? Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyi stock index inoumbwa ne2.000 madiki emakambani emari anonyanya kubva kuUSA.
Idzi nhanhatu dzinopisa dzemusika wemusika dzakatenderedza mazororo
Kudzoka kwemazororo kuri kuzounza akateedzana emakore erima kune vanoita zvemari vanozowana mitengo yakachipa mumatanda.
Masheya eUS akasangana zvakasimba mushure mekutengeswa nehutachiona munaKurume, izvo…
Kana Repsol ichizivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti ndeimwe yemakambani anopa hukuru hukuru hwekuongorora, nematanho ari pakati pe5% ne15%,
Kune vazhinji varidzi vekumusoro-soro avo vakarova iyo Nifty inogadzira inodzoka muhuwandu hwe35% kusvika 60 ...
Warren Buffett anogara ari mumwe wevanhu vakapfuma kwazvo pasirese, aine mambure akakosha emabhiriyoni 80,8 ...
Iwo masheya anotengeswa pamisika yemasheya yakatarwa (stock exchanges) senge National Stock Exchange (NSE) uye iyo Stock Exchange ...
VIX ndiyo kodhi yeinonzi zviri pamutemo Chicago Bhodhi Sarudzo Sika Musika Volatility Index (muchiSpanish: sarudzo yemusika kusagadzikana indekisi ...
Iyo FTSE 100 indekisi inoumbwa nemakambani zana makuru (nemari yemari) yakanyorwa pa ...
Pakave nekufungidzira kusingaperi nezve mhando yekudzokeresa hupfumi hweUS huchave. Zvichava nekukurumidza kupora muchimiro ...
Iyo DAX, DAX 30 kana DAX Xetra ndiyo yebhuruu chip stock index yemakambani makuru makumi matatu ...
Mukutengeserana real estate, kune akati wandei marudzi e "kukosha" kwakapihwa kune chaicho chivakwa, ese ayo anoshanda ku…
Inditex kutengesa mukati mekota yekutanga yegore remari 2020 –pakati paFebruary 1 kusvika 30…
Kana misika yequity iri kuzviratidza pachavo kune chimwe chinhu panguva ino, semhedzisiro yemhedzisiro ye ...
Ndekupi kwekudyara mukota yechitatu?
Hapana mubvunzo kuti kudonha kwakanyanya kwakaitika mumisika nekuda kwemhedzisiro yecoronavirus ine ...
IUnited States Federal Reserve inobvumidza kufarira pa0% kusvika 2022
United States Federal Reserve (Fed) yakafunga kuchengetedza zviyero zvazvino padanhau rakadzika re0% kudzamara ...
Inoshamisa data rebasa muUnited States
Zvinotoshamisa kuti data rebasa rakagadzirwa muUnited States izvo pasina kana munhu aitarisira, kunyangwe ...
Iyo Dow Jones inodarika kutsigira-kwenguva pfupi
Iyo Dow Jones yakaratidzirwa muzvikamu zvechangopfuura zvekutengeserana nekutyora mutengo waro pamusoro ...
Kuisa mari muzvikamu zveNikkei
Iyo Nikkei 225, inowanzozivikanwa seinongedzo yeNikkei, ndiyo inonyanya kufarirwa indekisi yemusika mumusika weJapan, ine 225 ...
Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve iyo Standard uye Varombo's?
Iyo Standard uye Varombo ndeimwe yeiyo maindices ayo anoratidza kukura kukuru panguva ino uye pamusoro ...
Musika wemasheya unoteerera gakava riri pakati peUnited States neChina
Chimwe chezvinhu chinonyanya kukanganisa shanduko yemisika yepasi rose equity ndeye ...
Oiri inopinda munzvimbo dzemari
Imwe yemidziyo yemari yakagadzirwazve mupotifoti yekudyara kubva munaKurume ...
Iyo Ibex 35 inoratidza kushaya simba kwakanyanya kupfuura mamwe makwere
Chancellor weGerman Angela Merkel uye Mutungamiri weFrance Emmanuel Macron vakapa 'Chirongwa Chekudzorera' cheUnited ...
OHL inomuka zvine simba mumusika wemasheya
Kupesana nekufungidzira OHL yakagadzirwazve mumusika wemasheya wenyika yedu uye panguva inotarisirwa ...
Mabhangi chikamu chinodzivirira mu2020
Chikamu chebhangi ndicho chikamu chikamu chakanakisa chemari sezvo kuvapo kwayo kuchitora kutariswa kwe ...
Iko musika wemasheya ichiri yakanakisa imwe nzira yekudyara
Kunyangwe zvese, kuisa mari mumusika wemasheya ndiyo yakanakisa sarudzo yekuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire, kunyanya kana iwe ukaenda ...
Endesa neRapsol vanovandudza zvawanikwa panguva yekoronavirus
Pakave nemakambani maviri akapfuura zvaitarisirwa mumhedzisiro yavo yebhizinesi mukota yekutanga yegore mu ...
Duro Felguera: kuita kwechicharro
Imwe yemaitiro akashamisa zvikuru mumazuva achangopfuura ndiDuro Felguera kubvira apo rendi ...
Mumwe wemhedzisiro yatinofanirwa kuve nawo yetsaona yakaitika mumisika yemasheya kutenderera pasirese ...
European Central Bank (ECB) yakaratidza zvakare kuti iri kuda kubatsira hupfumi ...
Mitengo yepasi rose indices munaKurume yakaratidza hunhu hwakapesana muhusiku huviri hwakafanana. Ndichiri…
Ndedzipi zvikamu zvakanyanya kusimbisa?
Iyo yepasirese, yeEurope uyezve kuderera kwespanish kunopinda zvakazara mune panorama yemakambani akanyorwa pane ...
Ungave sei nemubhadharo mune mari?
Iyo nguva yasvika yemidziyo yemari yekudyara uye ichi chokwadi chinogona kubva kumatunhu akasiyana ...
Kudzokazve kana kushanduka kwemaitiro mumisika yemasheya?
Tekinoroji inoenderera ichive, pasina kupokana, iyo chikamu icho chinoramba chichiratidza zvakanyanya simba. Kusvika padanho rekuti ...
Mabhangi: OPAS, runyerekupe uye zvakashata mhedzisiro
Iko musika wemasheya unoramba uri chishandiso chakaipa chekuchengetedzeka kwebhangi chikamu mushure mekuwedzera kwecoronavirus uye yatove ...
Ndeapi misika yakanakisa yemari yekudyara mairi?
Spanish, European kana United States equities. Uku ndiko zvakare dambudziko iro vazhinji ve ...
Coronavirus inozunza musika wezvinhu
Iyo Coronavirus inoratidza zvakare maitiro ayo mumusika wezvinhu zvisina kugadzirwa, zvichikonzera kusimuka uye kudzoka shure zvichienderana nedanho ravari.
Spanish zvisungo zvekutonga zviri munjodzi
Kugadzikana muSpanish yakasununguka zvisungo chinhu chakajairika icho chakachengetedzwa mumakore achangopfuura
Shanduko mutsika dzekudyara: inguva yehunyanzvi here?
Maitiro edu ezuva nezuva uye hukama kana hunhu mukudyara hwachinjwa nematanho ekuvharirwa akaitwa ...
Marii yakawanda inodiwa kuisa mari mumusika wemasheya?
Kuuya kwecoronavirus kwakonzera kudonha kwemitengo yezvikamu zvinotengeswa mumisika ye ...
ACS inodonha kubva pasi ne22%
ACS yakadzokororwa kubva pasi payo pakati paKurume nekungodarika makumi maviri muzana. Kuva…
IAG uye kukosha kwekushanya: kuve kana kusave pamusika wemasheya
Kana paine pachave nechikamu chakakanganiswa nedambudziko rehupfumi rakakonzerwa nekuwedzera kwecoronavirus iyo isina ...
Misika iri kumirira matanho matsva ehupfumi muEU
Iyo Eurogroup iri kushanda papakeji yezve hupfumi matanho ekugadzirisa iyo coronavirus dambudziko rinosanganisira kushandisa iyo ...
5 hunhu hunosimbisa kubhadhara chikamu
Tiri panguva iyo varimi vemari vari kufunga kuti vari kuenda kunotora chikamu chavo nekuda kwemvura ...
Ndiyo here nguva yekutengesa mari yedu yekudyara?
Mune mamiriro ekusagadzikana kukuru, uye nekushomeka kwakanyanya mumisika, mari yekudyara yakasangana mu ...
Kwakaipa kwazvo kwehunyanzvi chikamu chebhengi chikamu
Isu tiri mumusika mamiriro zviri pachena uye kumwe kusahadzika kunovapo panguva ino ndekwekuti ...
Yakanyatsotsanangurwa mazano mushure mekuparara kwemusika wemusika
Nepo vamwe vaongorori vemisika yemakambani vachitaura nezvekuti mitengo yemasheya yakaenzana, ...
Yakazara kuparara mumisika yemasheya kutenderera pasirese
Kufambisa kwakadai hakuna kumbobvira kwaitika mumisika yemari pasi rose. The…
Kuongorora kwekuchinja mune mamwe mabhizimusi eIbex makumi matatu nemashanu
Mumwe wemhedzisiro nekuputika kwecoronavirus ndeyekuti kuongororwa kutsva kuri kugadzirwa mumitengo iyo ...
5 kukosha kwausingafanire kuve
Kudzokororwa kwemari muSpain kwaive kwakapoteredza 19% muzvikamu zvishanu zvekutengesa. Asi…
Investment zvikwereti: zvakakosha here?
Izvo zviri kuwedzera kuve zvakajairika kune vechidiki vatengesi kukumbira mari yekudyara kuti vaite mari yavo mumusika wemasheya.
Gadzira nzvimbo yekudyara nekudzidza kubva pazvikanganiso
Chidzidzo chevashambadziri kuti vadzidze kubva pakupunzika kwemisika yemari semhedzisiro ...
Zvimwe zvikamu zvinodzikiswa uye zvimwe zvinomiswa
Kumwe kwekutyisa kukuru kune chikamu chevashambadziri ndechekuti zvikamu zvemakambani zvinoderedzwa kana ...
Chii chinonzi kupora muV, U kana L?
Hapana mubvunzo kuti mhinduro yemisika yemari kutenderera pasirese inoenderana ne ...
SOS: kuongororwa kwemakiti emari
Kune mashoma kwazvo masheya mumisika yemari iri kuzviponesa kubva pane ino chaiyo dhayeti pa ...
Iwo mashanu maitiro anonyanya kukanganiswa nekoronavirus
Ndezvipi zvinodzivirirwa zvakanyanya pamusika wekutengesa?
Imwe yemaitiro ekutarisana nenguva dzakaoma mumusika wemasheya yakavakirwa pakuumba mari yekudyara ine hunhu hwekudzivirira kana hwekuchengetedza.
7 masheya akaita zvirinani mumusika wemasheya kuuraya
Ino nguva inorema artillery yeFederal Reserve (Fed) uye European Central Bank (ECB) haina kukwanisa ...
Zvinotaridza kuti huwandu hwenhanhatu dzemazana matanhatu ezviuru hunogona kunge huchiita sepasi mune yakasarudzika yemari indekisi ...
Iwo mashandiro ayo anozopedzisira abuditsa kana kuti kwete ekudyara mumusika wemasheya anoitwa kuburikidza ...
Kuputsika kwemusika wemasheya: masheya achapindura sei kubva zvino zvichienda mberi?
Iko kuzara kwakazara kwemusika wemari. Aya ndiwo marondedzero anoitwa nevanoongorora zvemari mamiriro azvino e ...
Hapana ivhu mumabhegi emunhu wese
Iwo epakati mabhanga eCanada, Japan. England, Switzerland, United States Federal Reserve uye European Central Bank yakazivisa ...
Matanho eacoronavirus alarm anokanganisa sei vashandisi vebhangi?
Iyo yekuvhunduka iyo vagari vanopfuura kuburikidza nayo inokanganiswa nehukama hwavo nenyika ye ...
Maitiro ekuchengetedza mari kana uchitengesa pamusika wemusika?
Chimwe chezvinangwa zvemumwe muzvinashawo mumusika wemasheya hachisi chekungoitira mari yavo kuchengetedza. Asi zvakare gadzirisa mashandiro ako ...
Kubhururuka kunoitika riini uye maitiro ekuvatengesa?
Bounce chimbo chinowanikwa kune vanoita mari kuti vadzikise kurasikirwa kwavo uye vasingatarise mirairo yekumira-kurasikirwa.
Pamberi pekutengesa kwakamiswa: Chii chingaitwe nevarimi mukutarisana nekutya?
Kana varimi vasina kusiya nzvimbo dzavo kusvika parizvino, havana imwe sarudzo kunze kwekutsungirira kunaya kwemvura….
Vanokunda uye vanokundwa vane kuderera kwemitengo muUS.
Iyo Fed mwero kutemwa kwemakumi mashanu hwaro poindi kwareva kufamba kutsva mumisika ye ...
Kunyangwe zvese, zvishanu zvakanaka izvo iyo coronavirus inotisiya isu mukudyara
Ichokwadi kuti kutya kwakabata mafambiro evashambadzi vadiki nepakati uye kuti ine ...
Ita panjodzi yekurasa kurasikirwa
Acciona yave iri yeimwe yeakanyanya kukosha tsika dzeSpanish equities uye kuti gore rino yaive yadzoserwa yakatenderedza 13%.
7 masheya akavandudza goho remugovano
Chibereko chemugovano chinovandudzika nekuderera mumusika wemasheya mushure mekunge Ibex 35 yagadzirisa ...
Ndezvipi zvinogoverwa? - Ungabatsirwa sei nazvo?
Tsananguro yezvikomborero zviripo, kwavanobva, uye maitiro ekuverenga purofiti inowanikwa kubva kwavari, zvinoenderana nekukosha kwekambani.
Zvipingamupinyi zvikuru zvemasaga ekudzokera kumatunhu akakwirira
Hapana munhu anopokana kuti kudonha mumusika wemasheya mumazuva ekupedzisira aFebruary kwave noutsinye. Kusvikira…
Ercros mukana wekumusoro
Ercros ndeimwe ye diki uye yepakati-capitalization chengetedzo ine yakanyanya vhoriyamu yemakondirakiti nekuda kwekuti ...
Iyo coronavirus inoisa kusagadzikana mumusika wemasheya: zvekuita?
Volatility ipfungwa yekuti varimi vanofanirwa kugara nayo, zvirinani panguva yekutanga hafu ye ...
Nzvimbo yekutengesa: kupi kwekuvhura nzvimbo
Hatigone kukanganwa kuti mashandiro ekutengesa haasi akareruka uye anoda technical mechanics ayo akakosha mukusimudzira kwavo.
Kukura kukuru mumusika wemasheya kunosvika riini?
Zvinoita kunge inyaya yenguva, asi shanduko ichauya nekukurumidza kwete kupfuura gare gare. Nekuti hapana chinomuka nekusingaperi, ...
Nguruve bhangi zvinhu mumisika yemari
Maitiro kana zvinhu zvemari zvinodaidzwa kuti nguruve mabhangi iwo mafomu ekudyara ari kuunza kudzoka kudiki gore rega, ...
Ndedzipi tsika dzinozobatsira kubva mukubuda kwemotokari yemagetsi
Kunyoreswa kwemotokari dzemagetsi muSpain kwakavhara 2019 nezvizere zvikamu makumi maviri nemana makumi maviri nezviviri, zvinosanganisira mota dzevanofamba, mota dzekutengesa uye ...
Kugovaniswa goho rinovandudzika pamwe nekuderera kwemusika wemasheya
Mhedzisiro kubva kuSpanish equities ndiyo yepamusoro-soro mukutengeserana kwepasi rese uye ndiyo inopa ...
Ko kana kutya kukaitika mumisika yemasheya epasi rose?
NeMuvhuro Muvhuro mumisika yequity kutenderera pasirese semhedzisiro yekuwedzera kwecoronavirus. Zvese…
Zviratidzo zvikuru zvekutengesa pamusika wemasheya
Une nzira dzakasiyana dzemusika wemasheya uye zviratidzo zvinogona kukupa mhinduro zhinji pane zvaunoda mubato rekudyara.
6 kukosha kunogona kuita zvirinani kupfuura mamwe ese
?? Chimwe chezvinangwa zvemumwe muridzi wemari kuvhura nzvimbo munzvimbo dzekuchengetedzeka dzinogona kuita zvirinani kupfuura vamwe vese….
Endesa naIberdrola vanoputsa mitengo yavo kumusoro
Zvaitaridza kuti vese Endesa naIberdrola vaive vasvika pachikamu chavo chepamusoro soro renzira yavo. Asi zvinoonekwa ...
Ferrovial, chimwe chezvinhu zvakanyanya kusheedzera pane Ibex 35
Imwe yemaitiro ekudyara mari panguva ino anosanganisira kuchengetedza Ferrovial munzvimbo dzekuchengetedzeka kwehafu yekutanga yeOne emazano ekudyara panguva ino anosanganisira kuchengetedza Ferrovial munzvimbo dzekuchengetedzeka zveramangwana .. hafu yechipiri yegore rino
Matanho aunogona kutenga
Kutenga pamusika wemari ndeimwe yenguva dzakasarudzika dzakanyanya kubva kuvashandi ava ...
8 masheya akaputsa rutsigiro kana kuramba
Tsigiro idanho remutengo pazasi peiyo yazvino, uye izvo zvinoonekwa zvichienzaniswa nemamwe manhamba ane hunhu hwakafanana ...
Investment mumakambani ari muInternet chikamu
Internet Europe ndiyo indekisi inounganidza kotora yemakambani makuru mune ino tekinoroji mukondinendi yekare.
Kudonha kwakashata kunokanganisa sei misika yemasheya?
Mutengo weBrent oiri wakashanda pamadhora makumi manomwe nemakumi manomwe neshanu dhiramu, ichirasikirwa - 54,78% ichienzaniswa ne ...
Inguva yekudzokera kumisika irikubuda?
Chimwe chehunhu hweanonzi ari kubuda misika yemasheya ndeyekuti vanogona kubvumidza purofiti yakakura mukutenga nekutengesa mashandiro.
Masekete mumusika wekuSpain wemusika akanganiswa nehurumende nyowani
Kune yatove nehurumende nyowani kuSpain uye kune akawanda matunhu akanyorwa pamisika yemakambani iri kuzokuvadzwa uye kubatsirwa.
8 maitiro ane yakawanda njodzi muna 2020
Kudzivirirwa mumabasa mumisika yemusika wemasheya hapana chinhu chiri nani pane kuburitswa pane hunhu hunogona kunyatso kuzviita.
Hunhu hwese hwenzvimbo yekushanya hunogadzirisa mitengo yavo pamusika wemasheya
Dambudziko remusika wemasheya rakakonzerwa necoronavirus iri kubatwa pachena mumisika yepasi rose yemari….
Zvakanakira nekuipira kwekutenga zvigadzirwa
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvigadzirwa zvigadzirwa zvemari zvinozivikanwa pamusoro pezvose nekuwandisa kwavo kuwanda.
Nei Ibex 35 iri kusaririra pamusika weEuropean stock?
Imwe yedhata inoratidza shanduko yemakuru eEuropean equices indices ndeyekuti iyo ...
Muka weSpanish stock market kana kusimuka kwenhema
Ibex 35 yakavharwa svondo rapfuura nekukwira kwe0,50%, izvo zvakonzera kuti mitengo yayo ive pamatanho atove padhuze kusvika mapfumbamwe e9.200.
Aena padhuze ne200 euros
Zvaiita kunge zvisingaite mwedzi mishoma yapfuura, asi chokwadi ndechekuti Aena atove panzvimbo yekurwisa chipingamupinyi chemazana maviri emadhora pamugove.
Masheya akasara anofanirwa kutengwa pamusika wemasheya here?
Kutenga akachengetedzeka zvakanyanya pamusika wemari iri zano rinotarisira kubatsirwa kubva kune dzakachengetedzeka dzakaita zvakanyanya.
Makambani akasimba uye akasimba eAristocratic Dividend Makambani
Tsananguro yekuti iwo maAristocratic Dividend Makambani. Iko kudzoka kwakawanikwa, maitiro ekudyara mazviri uye kuti ungazviwana sei.
6 kutenga mikana gore rino
Dambudziko rega rauchazove naro nderekuona mikana iyi yekutenga neyebhizinesi uye kuti iwe unogona kutora mukana wavo kuita kuti mari ibatsire.
Maitiro akanyanya kurohwa mumusika wemasheya nehutachiona hweChinese
Hutachiona hweChinese hwarovawo varimi svondo rino nekukanganisa misika yequity ...
Iko kushomeka kweFED uye ECB kunovhura nzira yekuve netariro mumisika yemasheya
Izvo zvaiita kunge zvisinga fungidzike masvondo mashoma apfuura zvave chokwadi: kushaya mari kweFed uye ECB yakavhura nzira yekuwedzera kuwedzera.
Ndiyo Netflix kukosha kwakaringana sevatsvakurudzi vanotiudza?
Pasina mubvunzo, iyo yakanyorwa Netflix yanga iri imwe yekuchengetedzeka iyo yakapa mutambo mukurusa ku ...
Mamwe mazano ekudyara mu2020
Hapana mubvunzo kuti rimwe remapazi ekudyara mu2020 riri kubhengi nekuda kwekukwira kwaro mumwedzi ichangopfuura.
Makambani anotarisa pane izvi zvigadzirwa zvakaiswa pasi pezvinhu zviviri zvinofanirwa kutariswa panguva yekuhaya. Makambani anotarisa pazvinhu izvi zvakagadzirwa anorongwa pasi pezvinhu zviviri zvinofanirwa kutarisirwa panguva yekuhaya. Izvi zvigadzirwa zvemari.
Kugovaniswa Kwekudyara - Isarudzo Yakangwara Here?
Iko kudzoreredzwa kwemagoverwa kunotsanangurwa senzira yechokwadi yekuwedzera kwekuwedzera muhomwe. Tsananguro yezvairi uye nemabatiro aungaite nayo
OHL inokoshesa 40% mumwedzi wekutanga wegore
Kana paine kukosha kwekukoshesesa panguva ino muzvikamu zveSpain izvo hazvisi izvo kunze kwe ...
Maitiro ekuchaja kiredhiti kutengesa?
Kutengesa pachikwereti muenzaniso uyo wakanyatsovakirwa pachokwadi chekuti iwe unogona kubatsirwa kubva mukuderera mumisika yemasheya kutenderera pasirese.
Ndeapi mazwi ekugara nekusarudzika mumusika wemasheya we2020?
Bato rinoratidzika kunge richiri kuiswa mumisika yemari, uye kunyanya muUnited States ...
Chii chinonzi Moat, izwi rekuti Warren Buffett rinoreva?
Tsananguro yezve hupfumi Moat yekambani iri, dzidza kuiziva, uye maitiro ekuishandisa kune iyo nyika yekudyara
Kukunda Zvivigiro neMasevhisi mugore rapfuura
Izvo hazvigone kukanganwika kuti kwave kune akateedzana ehunhu hwakabuda vakundi mugore rapfuura, nekutenda kunosvika makumi mashanu muzana.
Ibex 35 yakamirira kudarika mapoinzi zviuru gumi
Iyo rebound yakaitika mumavhiki apfuura muinosarudza equity index, iyo Ibex 35, yakaitungamira kuyedza nzvimbo yemapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana matanhatu.
Ence imwe yetsika dzinopisa mugore rino
Ence ndeimwe yemasheya anonyanya kushanda mumwedzi ichangopfuura uye chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati chakamirira.
The 6 kuchengetedzeka pamwe akanakisa mugove
Kune vatengesi vanoisa zano ravo pakuisa mari mumakambani ane goho repamusoro rezvikamu zvinosvika mapfumbamwe kubva muzana.
5 nzira dzekuvandudza purofiti mukudyara mumusika wemasheya
Mutengo unodhura wemari, semhedzisiro yesarudzo yeEuropean Central Bank (ECB) kutakura ...
Maitiro ekugadzira iyo Permanent Portfolio yemari inowanikwa
Iyo Permanent Portfolio inokutendera iwe kutora mukana kune ese asset ongororo, uku uchidzikisa njodzi. Kushanda kwayo? Zvakareruka uye zvakapusa
Hupfumi hweSpain hunotonhora uye hunokanganisa misika yemasheya
Iyo yazvino macro dhata pane hupfumi hweSpain inoratidza kuti kutonhora kwayo ichokwadi uye kuri kukanganisa misika yemasheya.
Oscillators yekutengesa pamusika wemasheya
Imwe yematurusi anowanikwa kune vashoma nevepakati varimari kuti vaite maitirwo avo inovezwa kuburikidza neascillators.
Masheya akasiyana siyana anogona kuita zvirinani muna 2020
Chimwe chezvinangwa zvevashambadziri ndechekupa kuchengetedzwa kunozoita zvirinani kupfuura vamwe vese.
Stock Screeners - Injini dzekutsvaga kusarudza anonakidza masheya
Tsananguro yezvinoita Stock Screeners uye zvavari, maturusi ekutsvaga makambani. Sarudzo yemapeji anofambisa maturusi aya.
Kurwa pakati peUS neIran kunoitei pamusika wekutengesa?
Kutanga kwegore idzva kwatiunzira nhau dzakaipa kuvashambadziri senge kupokana pakati peUS neIran uye izvo zvakatungamira kune musika we stock stock.
Kutanga zviratidzo zvekushaya simba kuEndesa, kana iko kubata?
Chikamu chemagetsi chichava chimwe cheicho chinogona kuchinja zvakanyanya mugore rino idzva remusika wemasheya, uye kunyanya zvikamu zveEndesa.
Telecos inodzokera kune radar yevarimi
Yakanga yave nguva yakareba kubvira pakange paine masheya matatu muchikamu cheterecom mune yakasarudzika index yeSpanish equities, iyo Ibex 35.
7 kukosha kunowedzera chikamu chavo mu2020
Unogona kusarudza makambani akanyorwa anopa mugove pamusoro pe7%, imwe yepamusoro-soro mukati memari yekondinendi yakare.
Aya makambani anotanga gore nenhau nyowani
Hapana chinhu chiri nani pane kuve nenhau nyowani pamakambani eIbex 35 kuti uwane mamwe ma parameter ekuita imwe nzira yekudyara.
Zviratidzo zvekupinda kana kubuda mumusika wemasheya
Chimwe chezvinangwa izvo vatengesi vazhinji vane kuona akanakisa masaini kuti vakwanise kupinda kana kubuda mumisika yemari.
Maitiro akachengeteka enzvimbo mune kuderera kwezvehupfumi
Ino ndiyo yakanakisa chiitiko yekuongorora kuti ndedzipi chengetedzo kana mari yemari inogona kuita seutiziro mumwedzi inotevera kana makore
Zvinangwa zvinofungidzirwa mu2020
Chimwe chezvinangwa muchiitiko chinotevera ndechekutsvaga misika iyo kusvika zvino waive wakanganwa munzira dzako dzekudyara.
Maitiro akadonha anopfuura 50%
Hapana chinhu chakaipisisa mumisika yequity pane kuverengerwa mumatokisi akarasikirwa nechero iwo wese musika wesitoko kukosha.
2020: iro gore rekugadziriswa?
Girinhi, simba rinowedzerwazve rakabva pakuva utopia kuenda kune chimwe chezvikumbiro zvinobatsira mumisika yemari.
Izvo zvinoshanda kutenga akanyanya-kuita masheya pakutanga kwegore?
Kutenga pakutanga kwegore kuchengetedzeka uko kwakanyanyisa kuita mugore rapfuura kunogona kuve zano rekudyara mu2020.
Maakaundi asina kutengwa emari anotengesa
Kuti ushandise aya maakaundi ekubhadharisa mari, mushandisi anofanira kutora kosi iyo, pakati pezvimwe zvidzidzo, iyo mitemo inotsanangurwa.
Chengetedza mari mumusika weBritish stock, wadii?
Shanduro yemasheya kuGreat Britain inochengetedza zvimwe zvakasarudzika zvinofanirwa kutarisirwa kana iwe uchizoita mashandiro ehunhu uhwu.
Nguva yakashata yeaidhivisual midhiya mumusika wemasheya
Kana paine chikamu mumakambani chisina kuenda panguva dzakanakisa dzayo, izvo hazvisi izvo zvinomiririrwa nevezvenhau nevekunzwa.
Vakuru vakanganwa veSpain varimi
Huwandu hwekutengesa ndohwo hunosarudza neimwe nzira inova ndiyo tsika dzakakanganikwa dzemari dzeSpanish
Mapfre inozivisa 'yambiro yeprofit' uye zvikamu zvayo zvinowira pamusika wemasheya
Mapfre akapedzisa zuva reMuvhuro uyu nekudonha padyo ne4%, mushure mekuzivisa kuti ichafanirwa kuongorora zvinangwa zvemari.
Mateki ekuita mashandiro anobatsira mumusika wemasheya pakupera kwegore
Aya angave mabasa ekukurumidza zvikuru nechinangwa chekuita kuti mashandiro abatsire mune pfupi pfupi nzvimbo yenguva.
5 masheya pamusika weSpanish wemusika uyo usina kutambura kucheka kubva pakuwa
Endesa yakaratidza mibairo yakanaka kwazvo pakati paNdira naJune 2019, nekuda kwekutonga kwakanaka kwemusika wakasununguka.
Shanduko muzvikamu zvakagoverwa neEndesa
Endesa ichagura 'kubhadhara kwayo' kuenda ku70% kutsigira kukura kwayo uye yakazvipira kusimudzira zvigadziriso, ichipa 100% kusvika zvino.
Ndedzipi huru zvikamu zveSpanish stock stock
Panguva yekuita mari dzako chimwe chezvinhu zvaunofanirwa kutarisa ndidzo zvikamu zvauri kuenda kunotora mari yako yese.
Kuisa mari muna Zvita pasina kuve pamusika wemasheya
Zvita mwedzi wekusimudzira mumisika yemari, asi kana paine chikonzero usade kuzvifumura kumisika yemari iyi.
Zvirongwa zvekudzoreredza zvakaenzana zvinobvumidza iyo otomatiki kutenga yemasheya matsva, nokudaro ichiwedzera chiyero chemasheya.
6 matipi ekuisa mari mu2020
Gore rino iro rave kuda kutanga, hazvizove nyore kuendesa mari zvakanaka, asi zvinopesana, izere nezvipingamupinyi.
Sniace anoedza kupora: achabudirira here?
Kuti hunyanzvi hweSniace huve nani, imwe yeaya masaini akagadzirwa mukuti yakwanisa kukunda ekupedzisira kuderera kwakakwirira.
5 tsika yekudzikama mu2020
Kune akateedzana ekuchengetedzeka ayo atinogona kushandisa zvakanyanya kutandara gore rino nekuti kusagadzikana kwavo ndeimwe yepasi pasi pamusika wenyika unoenderera
Zvita mwedzi wekusimudzira par kugona kweSpanish stock stock
Pakati pematanho ekumusoro anowanzozvidzokorora, Zvita ndiwo mwedzi wakanakisa kutora zvigaro muSpanish equities.
Runyerekupe rwekutengeswa kweEndesa kuvashambadzi veChinese
Runyerekupe rwakaonekwa mumisoro yenhau dzedigital media: "ENEL inoda kubvisa Endesa", ichizadza vatengesi nekusahadzika.
Oryzon inogona kuva chivharo cheSpanish bhegi
Oryzon inogona kuve imwe yemakambani ane kushamisika kwakanaka kwegore rinotevera mumusika weSpain equity.
Misika yemusika yemuUS inogona kuramba ichikwira here?
Iko hakuna vashoma vaongorori vanotarisira kuti US stock musika yakawedzera kana kuti iri padyo nemamiriro aya uye isu tichazoziva munguva pfupi.
Chii chekuita mune yemahara yedzinza mamiriro?
Dzinza remahara ndiro rakaipisisa iro rinogona kuumbwa mumitengo, pakati pezvimwe zvikonzero nekuti harisisina zvitsigiro pasi.
Ndeapi maitiro anotungamira kusimuka kana kurasikirwa mumusika wemasheya?
Sezvo zvinogona kuongororwa, haisi nguva dzose iwo maitiro akafanana anotungamira kusimuka, kana mune avo avo vanorasikirwa zvakanyanya mumisika yemari.
Zvinangwa mumitengo yezvikamu paIbex
Kunyangwe tarisiro yeIbex isiri yakanyanyisa kunaka, vane mikana inonakidza yekuongorora zvakare.
9 zviito zvekudzivisa mumusika wemasheya
Maitiro akakosha pamusika wemasheya anovandudzwa kudzivirira zviito zvisingadiwe mumabasa anotyairwa kubva mumisika yemari iyi.
Chenjedzo dzinofanira kutorwa kana uchiisa mari
Tichazopa pfungwa kuvashambadziri kuti vatore matanho akadzivirirwa kubva zvino kudzivisa kushamisika pamusika wemasheya.
Grifols, imwe kukosha iyo inopinda mumufananidzo wekusununguka kusimuka
Ipo Grifols 'tekinoroji mamiriro aive akanaka, zvakatonyanya kudaro kubva svondo rino payakapinda yemahara-kusimuka nhamba.
Ndeapi kukosha kwemitengo?
Kukoshesa kuisa mari, kana kuisa mari mukukosha, chiitiko chekudyara icho chinogara chichiita kudzoka kwakanaka pamusoro penguva yakareba.
Kutora zvine hushamwari kweSwitzerland stock exchange kune BME
Mutengo wakaburitswa wePublic Offering of Acquisition (OPA) yemasheya paBME wave kumagumo pa34 euros pamugove.
Matanhatu matanhatu ekutanga 2020
Hapana chinhu chiri nani pane kutaura kuti ndedzipi tsika dzeSpanish stock stock iyo inogona kuita zvirinani kupfuura zvimwe zvese kubva mumwedzi waNdira
Naturhouse inodarika mairi euros
Parizvino, chimwe chezvinhu zvinopisa mumusika weSpanish unopfuurira zviri pachena iyo Naturhouse kambani yezvigadzirwa zvekudya.
Sei IAG yakakosha kudaro?
IAG ndeye kuchengetedzeka kwakabatana zvakanyanya nekushanduka mumutengo wemafuta asina kuchena uye chokwadi ichi chinokonzeresa kuti kusagadzikana kuve kwakanyanya.
Kudzokorora kwezvikamu zveIbex 35 zvinogadzirwa sei?
Segore rega rega, izvo zvikamu zveIbex zvichavandudzwa, saSacyr izvozvi. Iko kunopinda nekubuda kwemaitiro matsva kunoitika
Njodzi nhanhatu dzinogona kukuvadza misika yemari mu6
Imwe yenjodzi inogona kuranga misika yequity ndeyekukwira kwemitero muzvikamu zveeuro.
Bankia munzira yayo huru kwazvo
Parizvino Bankia masheya ari kutengesa akatenderedza 1,73 euros, rimwe rematanho akaderera mumakore apfuura.
Misika yemasheya iri kudzikisira hupfumi hwehupfumi here?
Zvisinei, patova nemimwe mishumo yehupfumi iyo inotaura nezvekupera kwezuva kuderera kwehupfumi uye iri muna 2021.
5 matema makore akarembera pamusoro peSpanish stock stock
Kunyangwe paine chokwadi chekuti musika wekuSpain wemusika uchiri pamusoro pekutsigirwa kwakakosha kwaanahwo pamapoinzi mazana mapfumbamwe, pane kushomeka mumutengo wawo.
Vanobatsirwa uye vanokundwa nehurumende yekuruboshwe muSpain
Hapana munhu mumusika wemakambani anokahadzika kuti mamwe matunhu anobatsira zvakanyanya kupfuura mamwe kana pachibvumirano chehurumende yemapapiro ekuruboshwe.
Maitiro ekushanda pamusika weSpanish wemusika mumazuva ekupedzisira egore?
Chimwe chinhu chinoshanda muchikamu chekupedzisira chegore ndechekuti zvinoda kurapwa kwakasiyana zvakanyanya zvichienzaniswa nedzimwe mwedzi.
Zvakanakira nekuipira kwekuva mvura mumusika wemasheya
Kubhadhara zvinoreva kuti iwe hausipo mune chero kirasi yemari, mune misika yakatarwa yemari uye mune musiyano.
Kuchengetedzwa kunotengesa padyo ne100 euros
Kune boka rakasarudzika mukati memusika wemasheya unoumbwa nezvivigiro zvinotengesa zvakapoterera kana padyo zvakanyanya ne100 euros pamugove.
Nhanhatu nhanho kudzikama pamwe nekuwa kwemusika wemusika
Red Eléctrica ndeimwe yezvakanaka mukati meboka iri sezvo chiri chimwe chezvikumbiro pamusika wemasheya chinoita senzvimbo dzakachengeteka dzekuchengetedza.
Duro Felguera, chicharro ine zvishuwo
Duro Felguera chengetedzo ine kusagadzikana kwakanyanyisa, nekuti zvakafanana zvinogona kusimuka 6% rimwe zuva sekukusiira iwe imwechete muzana zuva rinotevera.
Telefónica munguva yechokwadi
Telefónica inowedzera kukura kwemari (+ 1,7% yakashumwa) zvichienzaniswa nechetatu chikamu che2018, nekuda kwekuvandudzwa kweSpain, Brazil neGerman.
6 zvinhu zvinokanganisa musika weSpanish stock
Chimwe chezvinhu chichagadzirisa shanduko yemusika weSpanish wemusika ndeyekuti hurumende yakagadzikana inogona kuumbwa mumazuva anotevera.
Iyo data iyo varimi vanofanirwa kugadzirisa pane chengetedzo
Iko kune imwe nhevedzano yemamwe madhata akajeka anoda hunhu hwakawanda hwemari pane chikamu chevashandisi vemusika wemusika.
Mhedzisiro yaSantander inoita mutengo wayo pamusika wekutengesa
Kuziviswa kwemhedzisiro yebhizinesi yekota yechipiri yegore rino hakuna kumira zvakanaka nekukosheswa kwezvikamu zveBanco Santander.
Repsol, Exxon neBP: mikana mitsva yekutenga?
Repsol yatanga kuburitsa mafuta muBuckskin, munda uri mumvura yakadzika yeUS Gulf yeMexico.
Iko kukura kwemari kwakaita sei?
Kune akawanda ekuwedzera kwemari mune kumwe kwekuchengetedzeka kunoenderana nekufamba uku mumaguta avo uye izvo zvinogona kuunza mabhenefiti.
Endesa yakananga kuma 27 euros
Endesa yakayemura kunyangwe muzhizha rino rakaoma, nekukwira kwe4%, nepo rondedzero inosarudzika yemusika wemari yenyika yakadzikira kusvika pa6%.
Spanish, North America kana European Stock Market?
Musika weSpanish wemusika ndiwo musika watinonyanya kuwana paminwe yedu uye tinoziva makambani akanyorwa pamusika wepasirese wenyika.
Matanho ekuti kuchengetedza kunobatsira mu2020
Imwe yekiyi dzekuita kuti mari yako ichengete mari iri mukusiyanisa mari yako nekuchengetedza kwakanyanya mugore rine njodzi seiri.
Nhaka yakasiyiwa naMario Draghi
Zvakaringana kurangarira kuti apo Mario Draghi akatora matanho akasimba uye chirongwa chataurwa pamusoro chakapera, hupfumi hweEurozone.
Ndiudze chii chako investor chimiro uye ini ndichakuudza icho chigadzirwa chekuhaya
Nhoroondo yega yega yekudyara ine imwe nzira yekurapa nzira dzekudyara kwadzo uye kuita kuti mari ichengetwe munzvimbo yepamusoro yekudyidzana.
Musika weUS stock unozopedza gore kanenge kukwira
Mari muUnited States iri kuita zvakanakisa gore rino, rave kuda kupera.
Nei musika wemasheya uchikwira pakatarisana nedambudziko rehupfumi?
Chimwe chezvinhu chiri kukwezva kutariswa kwevatengesi inyaya yekuti musika wemasheya uri kukwira nekuda kwedambudziko rehupfumi.
Zvitsva zvinowedzerwa kumusika weSpanish wemusika: imwe nzira yekudyara
Madrid Stock Exchange iri kuve imwe yeanoshanda zvakanyanya maererano newedzero dzinozo nyorwa pamisika yemari
Red Eléctrica pane radar yekutenga mune ramangwana
Imwe yezvikurudziro yekuvhura nzvimbo muRed Eléctrica imhaka yekuti ndeimwe yemakambani eIbex 35 ane purofiti yepamusoro.
Inguva yekupinda munzvimbo dzeEnagás?
Enagás yanga iri imwe yemari dzekuSpain dzakakoshesa zvakanyanya mumwedzi gumi nembiri yapfuura.
Robo Advisor: chii icho?
Isu tinokuudza zvese nezveRobo Advisors, chii icho uye ndezvipi zvakanakira sekudyara kweramangwana? Tsvaga zvakwakanakira uye maitiro ekuzvishandisa.
Iyo Ibex 35 inosara kumashure mukati meye indices dzeEuropean
Iyo yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, ndeimwe yevatambi vakaipisisa gore rino, yave kuda kupera.
Kutengesa stock ramangwana
Nguva yemberi mumisika yemari inoumbwa muchibvumirano chinosungira mapato anobvumirana kutenga kana kutengesa.
Maitiro echikamu chemagetsi cheSpanish
Chikamu chemagetsi chinozivikanwa nekuti nhengo dzayo dzese dzakanyatsozivikanwa uye dzakabatanidzwa mukati meIbex 35.
Chekutanga zvikamu zvekudyara mune: mupunga, waini kana maoiri
Kune zvikamu zvekutanga zvekudyara mazviri, senge mupunga, waini kana maoiri, inova sarudzo inowanikwa kwauri mumisika yemari.
Nei Abengoa yakanyorwa pa0,22 euros pamugove?
Kubva pakuva imwe yemachira ekorona kusvika pakukosha chero chinhu pamusika wemasheya, uku kuongorora kwaAbengoa kwemisika yekutengesa mumakore apfuura
Pachave neakareba akamirirwa Kisimusi Rally gore rino?
Rally yeKisimusi inowanzo shandiswa nevashambadzi vadiki nepakati kuti vagadzire mhedzisiro yavo yegore.
Matiki madiki ekuvandudza kutengesa kwemusika wemasheya
Chimwe chezvinangwa zvevashambadzi vadiki nepakati ndeyekugadzirisa zvirinani mitengo yekushanda pamusika wemasheya.
Dzimwe nzira dzekuisa mubhegi kune mamwe ma profiles anodzivirira
Imwe yeakanakisa zvikumbiro zvevanozvidzivirira mari vanogona kunge vari mari dzinosanganisa equity nedzimwe mari dzemari.
Ungatengesa sei kufamba kwekufamba pamusika wemusika?
Imwe yekiyi dzekubudirira kwekuvhiya kunoitwa mukufamba kweye bearish ndeyekuti ivo vanonangidzirwa kune ipfupi nguva yekugara kwenguva.
Inogona here Nhare mbozha kuve imwe nzira kune Telefónica?
Mumwe wemibvunzo irikubvunzwa nevashambadzi vazhinji ndewokuti zviri nani here kuisa mari kuMás Móvil kana muTelefonica.
Takatarisana nemamiriro ekuderera kwehupfumi hwenyika, ichokwadi kuti zvinoshamisa kuti misika yemari haina kutora mukana wakadai.
Sei kubatsirwa nekutengesa kwepamhepo pamusika wemusika?
Vatengesi vanosarudza kuita mashandiro avo online fomati, ndiko kuti pamusoro peInternet, vanogona kubatsirwa nezvakanaka zvinogadzirwa izvi.Vanodyara vanosarudza kuita mashandiro avo mu online fomati, ndokuti paInternet, vanogona kubatsirwa nezvakanakira zvinogadzirwa neiyi inokosha kushambadzira chiteshi
Izvo zvakakunakira iwe kuti utarise hunhu hunotyisa kwazvo mumari inoshanduka kuitira kuti usavhure zvinzvimbo mavari uye nenzira iyi udzivise kufumurwa kwavo.
Ungaita sei kuchengetedza mari pakutengesa masheya?
Chidiki diki chaunogona kushandisa izvozvi kuti uchengetedze mari pamari yako wega ndeyokumirira kwenguva yakareba kuti utengese zvikamu.
Inguva ipi yegore iyo yavanogona kutengwa pamusika wemusika?
Kusarudza nguva yegore yekudyara mumusika wemasheya ndechimwe chezvinhu zvatinofanira kuzvisarudzira kuita mashandiro ane pundutso mumusika wemasheya tiine vimbiso huru dzekubudirira.
Inditex kutengesa kukura: inguva yekutenga here?
Imwe yesimba reInditex ndeyekuti inonyanya kukurudzirwa nevanoongorora zvemari mune rinotevera gore rekudyara.
Eurona mune yakaoma mamiriro
Kana paine chengetedzo yakaodza moyo vese vashoma uye vepakati varimari, yanga isiri imwe kunze kweEurona uye iri parizvino kutengesa pa0,30 euros.
Maitiro ekushanda mukutarisana nekupokana?
Kuramba mumusika wemasheya ndechimwe chezvikamu zvakakosha mukuongorora kwehunyanzvi uye kana iwe uchiziva mashandiro aungaita iwe unogona kuwana zvakawanda zvinobudirira mukushanda.
Mahwendefa maviri akakosha pamusika weSpanish wemusika: Ibex 35 Zvikamu uye Ibex 35 Inverso
Yechipiri ye indices yenyika, iyo Ibex 35 Inverso, ine basa rekudzokorora mafambiro ezuva nezuva eIbex 35, asi nenzira yakatarisana.
Kubhuroka kwaThomas Cook kunorova kushanya kweSpanish pamusika wemasheya
Idzo nzvimbo dzakanyanya kukanganiswa nekusabatika kwaThomas Cook uye yakarova kushanya kweSpanish pamusika wemasheya ndizvo chaizvo zviwi: iyo Balearic Islands neCanary Islands.
Nderipi zano rekuvandudza nemabhangi?
Kana paine chikamu chakaneta kwazvo izvozvi, izvo hazvisi izvo kunze kwebhengi rebhangi. Zviri pamatanho mashoma mumakore achangopfuura uye nemitengo yeZvakaringana kuyeuka kuti maererano nehunhu hwenzvimbo yemabhengi mune yakasarudzika stock index, iyo Ibex 35, chikamu chakanaka chevamiriri vayo vari pahafu yemutengo mu zvine chekuita nekotesheni kubva makore mashoma apfuura
Iwo akanakisa zvikamu zvekudyara mushure mekudzoka kubva kuzororo
Bhengi rekudyara kuUS Morgan Morganley yakagadzirisa fungidziro dzayo dzemabhangi eSpain mushure meEuropean Central Bank (ECB) Hapana mubvunzo kuti kana misika yemasheya ikakwira muchikamu chekupedzisira chegore, chimwe chezvikamu zvemusika wemasheya zvichakweva main indices kuvaka
5 kukosha kwakasimudzira yavo yehunyanzvi chimiro mumazuva apfuura
Makambani einishuwarenzi ndeimwe yehunhu hweIbex 35 iyo inogona kutora kubhururuka zvishoma nezvishoma nekuda kwekuvandudzika kwayo muchikamu chehunyanzvi.
Acerinox yakabatana nehupfumi hwekutenderera
Imwe yemaitiro eiyo yakasarudzika equity index, iyo Ibex 35, iyo yakadzikira zvakanyanya mumakore achangopfuura yave iri kambani yesimbi Acerinox.
Kumwe kuchinjana kugadzirisa uye kutiza kusagadzikana kwezvematongerwo enyika kuSpain
Vashandi ndivo chimwe chezvikamu zvinonyanya kunetseka nezve kusagadzikana kwezvematongerwo enyika kuSpain, kwavachavhota musi waNovember 10.
6 kuchengetedzwa nechikamu chinobatsira kwazvo zvisati zvaitika
Mugove unogona kuve sarudzo inosanganisirwa mumapotifoliyo evashambadziri munguva dzekusagadzikana.
Kurwiswa kwenzvimbo dzinocheneserwa Saudi Arabia kunokanganisa sei misika?
Mushure mekurwiswa muSaudi Arabia, vaongorori vanotenda kuti mutengo wezvakanaka unogona kuenda kuchipingamupinyi che $ 100 dhiramu.
Hunhu hukuru hwemakepisi: zvakwakanakira nekuipira
Mukati merondedzero yekusarudzika kweSpanish equity, iyo Ibex 35, kune mamwe maitiro akatsanangurwa anofungidzirwa seakakwirira Mukati meiyo index inosarudzwa yeSpanish equities, Ibex 35, kune mamwe maitiro akatsanangurwa anofungidzirwa se cap hombe
Mazano manomwe ekushanda nemitengo yakaderera
Hazvishamise kuti isu tichazofanira kurarama nemitero yakaderera kwazvo, kunyangwe nekudzoka kwakashata.
Mari yekutengeserana remangwana
Imwe yemabhenefiti akagadzirwa neramangwana remari ndeyekuti une mari zhinji yekuita mashandiro: madhora ekuUS.
Chiitiko chesarudzo nyowani chingakanganisa sei misika yemasheya?
Kana paine chikamu mune zviyero zvinogona kukuvadzwa nesarudzo nyowani, imagetsi, sezvo iri chikamu chakatemerwa.
5 midziyo yemari ine njodzi yakawanda, asi iine mukana mukuru wekuongorora
Kana paine mari yemari yakabatana nemabasa ane njodzi, zviri pachena kuti chero mari chaiyo nekuda kwekusagadzikana kukuru kwainopa.
Matanho ekuvhura zvigaro mumusika wemasheya
Iwe une masisitimu uko iwe kwaunogona kupinda mumisika yequity uine zvimwe zvivimbiso zvekubudirira pane mamwe matanho.
Matipi manomwe ekuvandudza kudzoka pane mari
Chikamu chekupedzisira chegore rino chinofanirwa kushandira varimari vadiki nevepakati kugadzira nzira dzakanakisisa dzekudyara kuitira kuti vave nechikamu chekupedzisira chegore rino chinofanirwa kushandira varimi vadiki nevepakati kuvandudza matipi ezve nzira dzekudyara kune avo vane chinangwa chikuru chekuvandudza nhaka yedu pachedu kana yemhuri.
6 matipi ekudyara mumusika wemasheya zvinobudirira
Imwe yemazano akanakisa ekudyara mari mumisika yemari ichave yekukoshesa kumwe kudzidza mukuita.
Ferrovial akanakisa emakambani ekuvaka
Zvikamu zveFerrovial zviri pachena zvine mutsindo panguva uye zvenguva, pasina chiratidzo chekushaya simba kuvhara nzvimbo.
Maitiro ekudyara kwehafu yekupedzisira yegore
Imwe yemaitiro aunogona kushandisa muchikamu chino chekupedzisira chegore kusarudza masheya ayo anogovera chikamu chakakwira.
Chero kusahadzika uko misika yequity ichiri kufanira kugadzirisa?
Zvagara zvichitaurwa kuti muvengi mukuru wemisika yekutengeserana kusahadzika kunogadzirwa mune zvehupfumi, zvematongerwo enyika uye nezvepasi Izvo zvakagara zvichitaurwa kuti muvengi mukuru wemisika yekutengesa kusahadzika kunogadzirwa mune zvehupfumi, zvematongerwo enyika uye bhizinesi renyika
Kuderedzwa mumutengo wakanangwa wemabhangi
Iko kugadzirisa mumitengo yemabhangi akanyorwa ndiko kuri kuita kwakawanda mazuva ano uye kuti ndiwo matanho akaderera mumakore apfuura.
Makiyi ekuwedzera purofiti yako mukutengesa pamusika wemasheya
Hapana mubvunzo kuti kuchengetedzwa kwekufungidzira ndeimwe sosi yemari inowanikwa kana hukuru-kukosha.
Mhepo traffic inomira muSpain: yakanaka kune vashanyi tsika
Iko hakuna kumiriri kwakasimba kwazvo pachikamu chehunhu hwevashanyi hwakanangana nehupfumi hwenyika uye hunogona kupa purofiti huru.
Ndedzipi tsika dzeSpanish stock market yakakanganiswa neBrexit?
Zvinonyatso kuzivikanwa kuti Brexit izwi rakabatanidzwa kureva United Kingdom kubuda muEuropean Union. Asi izvo dzimwe nguva zvisingazivikanwe Zvinozivikanwa kuti Brexit izwi rakaumbwa kureva kuenda kweUnited Kingdom kubva kuEuropean Union
Chii chinoitika kune Telefónica?
Rutivi rwakanaka rwekuita uku neTerefonica mumisika yemasheya ndeyekuti gohwo remugovano waro rave pamusoro kupfuura mwaka wezhizha usati watanga.
Mazinga ekutarisa muIbex 35
Mukudaro, iyo yekukakavara yakaiswa pamatanho ari pakati pe8.700 uye 8.900 mapoinzi, iri iro danho remadonhwe ekupedzisira.
Inflation inodonha kusvika pa1%, zvinokanganisa sei?
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo umo huwandu hwemitengo yepakati nepakati hunoratidzwa ndiko kuwedzerwa kwehuwandu hwepenjeni yeruzhinji.
Mutengo wakanangwa padura unovimbika here?
Mutengo wakanangwa wechikamu ndiwo mutengo uyo muongorori wemisika yemari anofungidzira uye izvo zvinogona kana kusasangana.
9 Mazano ekuti usapinda mune chikwereti mumusika wemasheya
Imwe yenjodzi huru inowanikwa mukudyara mumisika yemari ndeyekuti iwe unogona kunge uri muchikwereti. Mune mamwe mazwi, imwe yenjodzi huru inowanikwa mukudyara mumisika yemari ndeyekuti iwe unogona kunge uri mumamiriro ezvinhu echikwereti uye kune izvi pane mamwe makiyi ekuzvidzivirira
Yakanakisa tsika yekutora mukana wevashanyi kuyerera muSpain
Pakati pemwaka wezhizha, Spain inova nzvimbo yekuenda kune vanhu vasingaverengeke vanosarudza nzvimbo dzavo nemaguta kuita nzendo dzavo dzezhizha.zororo mukati mekuyerera kwevashanyi varipo, zvese maererano nechikamu chinopa uye kubva kune dzimwe nyika
Chikamu chebhangi chine hunyanzvi hwehunyanzvi hwehunyanzvi
Imwe yemasekete ine kuita kwakaipisisa gore rino mumisika yemari iri chokwadi chikamu chebhangi. Iyo inopa imwe yemasekete ine kuita kwakaipisisa gore rino mumisika yequity pasina mubvunzo chikamu chebhangi.
IAG pamharadzano muIbex
Chimwe chezvakanaka zveIAG ndechekuti inogovera pakati pevashandi vayo chimwe chezvikomborero zvakawandisa zvemari yenyika.
Kukundwa kwesarudzo kwehurumende iripo muArgentina kwakakonzera kupunzika kwemusika weAmerican stock nemasimba makuru.
Iko mukana wesarudzo muSpain neItaly kuti zviitike kudonha uku kwaunza rondedzero inosarudzika yemari yeSpain, iyo Ibex 35, kuenda kune yakaderera mwaka.
Zviri nani kuve kuBanco Santander kana kuBBVA?
Pane dhinomineta pakati peSantander neBBVA uye ndezvekuti mune ese ari maviri vanobhadhara zvikamu kune avo vagovana navo, iine purofiti inosvika 5%.
IPC inokanganisa sei kudyara?
CPI yakakwira inogona kuunza makakatanwa akakodzera munyika kana nzvimbo yehupfumi, kusvika pakuti imwe yemisika yakanyanya kubatwa ndeyemari.
Iyo Ibex 35 inotanga iyo downtrend nekudonha pazasi pe9.000 mapoinzi
Iyo yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, yakavharwa mushure memwedzi yakawanda pazasi peiyo yakakosha nhanho ye9.000 mapoinzi.
Ibex 35 inogona kugogodza pasi mazana mapfumbamwe
Yakazara kuputika boom yeSpanish equities izvo zvava kuda kutera kune nyowani downtrend. Mushure mekuridzwa zvizere Volantazo inosarudzika index yeSpanish equities iyo iri kuda kutera kune nyowani nyowani. Mushure merudzi rwekusarudza rwenyika, iyo Ibex 35, yave kuda kuiswa pazasi pezviuru mazana mapfumbamwe
6 zvinhu zvinowona shanduko yemusika wekutengesa muhafu yepiri yegore
Hapana mubvunzo kuti chikamu chechipiri chegore chichava chakaomesesa kumisika yemari yekutarisana nayo. Iko kune zvakawanda zvinhu izvo Hapana mubvunzo kuti chikamu chechipiri chegore chichava chakaomarara kwazvo kutarisana nemisika yemari. Iko kune zvakawanda zvinhu zvingangoburitsa chiyero mune imwe nzira kana imwe
Kufamba, zororo uye fashoni, iwo akakosha zvikamu zveCommerce
ECommerce ndeimwe yemakambani ari kubuda mumakambani muUnited States, aine mamiriro akajeka kumusoro.
Izvo hazvigone kukanganwika kuti mazuva mashoma apfuura, chinangwa cheNokia Gamesa chaive 18 kana kunyangwe makumi maviri emadhora pamugove.
Mumamiriro ezvinhu asina kunaka emusika, chokwadi chekuti hutungamiriri hweBBVA hwave kupomerwa huori hunogona kukanganisa zvinhu.
3 inogoverana nesarudzo dzekufona paIbex 35
Iyo Ibex 35 ndeimwe yemasheya indices ayo parizvino asina kusimba mukati meEuropean equities. Asi kunyangwe zvakadaro, paine hunhu hutatu Iyo Ibex 35 ndeimwe yemasheya ezvitoro izvo pari zvino zvisina kusimba mukati meEuropean equities, asi kunyangwe zvakadaro, kune hutatu hunhu hunoratidza hunoshamisa hwehunyanzvi
Matipi ekudyara mukati mekutengesa kwemasikati
Iwo anonzi intraday mashandiro anotakura njodzi dzakawanda kupfuura mune mamwe ese nekuti chero kukanganisa kwaunoita kunogona kudhura zvakanyanya,
Ndedzipi tsika dzekuisa muchikwama muzhizha rino?
Naturgy yave iri imwe yetsika dzeIbex 35 iyo yakaratidza kuwedzera kwakanyanya bearish mumwedzi waChikunguru
Sarudzo dzinogona kuitika muItari dzinogogodza pamisika yekutengesa misika
Kudonha muIbex 35 kwaive muRome, uko mari yepamberi yeItari yakakwira kusvika pamakumi mapfumbamwe nematatu emabhangi uye kubhengi kwaive chimwe chezvikamu zvakaipisisa pasi pekutengesa equity.
Macroeconomic nharaunda yemusika wekutengesa
Ehezve, macroeconomic nharaunda yemusika wekutengesa ichave yakakosha kuitira kuti mumwedzi iri kuuya tigone kuita yakanaka yekudyara portfolio Chokwadi, iyo macroeconomic nharaunda yemusika wemusika ichave yakakosha kwazvo kuitira kuti mumwedzi inotevera tinokwanisa nzvimbo yakanaka yekudyara uye yakaenzana, nechinangwa chekukanganisa zvishoma sezvinobvira